Konke endifuna ukukwenza kukwenza uthando kuwe ngentliziyo - Izinto Zobugcisa
Konke endifuna ukukwenza kukwenza uthando kuwe ngentliziyo
Le ngoma ibhalwe nguMutt Lange, umvelisi omkhulu obesebenza kwezinye zeyona albhamu inkulu yee-80s: ii-AC / DC's Okumnyama Kokumnyama , Def yeLeppard IHysteria , kunye nowasemzini 4 . ULange ukwangumbhali wengoma, esebenzisana namagcisa asebenza nawo, kodwa kule meko ingoma yiyo yonke.
ULange ubhale le ngoma kwii-70s kwaye wayefuna ukuba uDon Henley ayirekhode. Igqityiwe yaya kuDobie Grey ('Drift Away'), owayikhupha ngo-1979 kwi-albhamu yakhe enegama. Le nguqulo ayizange ibonwe, kodwa xa Intliziyo ibhala ingoma ye-albhamu yabo ka-1990 Brigade , kwaba yinto enkulu, efikelela kwi # 2 e-US.
Le yingoma engaqhelekanga, noAnn Wilson ecula malunga nokuchola umntu othutha iihitshi kwaye alale naye kwi-motel, ngokucacileyo ngenjongo yokukhulelwa. Ngaphambi kokusa, uyamshiya, kodwa umshiyele inqaku:
Kwindinyana yesithathu, udibana naye kwakhona, kwaye ubona umntwana abamenzileyo. Kuvakala ngathi uAnn uxelele omnye umntu (mhlawumbi umyeni wakhe) ukuba umntwana ngowakhe, kwaye akafuni ukuba imfihlo iphume:
Unokuyithelekelela indlela awothuka ngayo
Xa wabona amehlo akhe
Ndithe nceda, nceda uqonde
Ndithandana nenye indoda
Kwaye yintoni angakwazanga ukundinika yona
Ngaba yinto encinci onokuyenza
Inguqulelo yoqobo kaDobie Grey yale ngoma inyusa kakhulu kwaye yeqa i-hitchhiker / ithanda ibali lomntwana. Ngwevu imane icula ngokubethwa kwaye izaliswe ngumnqweno:
Konke endifuna ukukwenza kukwenza uthando kuwe
Kukho izinto ezizigidi esinokuzenza
Kwaye sithandwa, mna, ndifuna nje ukuzenza nawe
UMutt Lange nguye kuphela umbhali othembekileyo kwezi nguqulelo zombini zengoma, ke kuyabonakala ukuba wabhala le ngoma ngelinye ixesha.
Ngama-70s, Intliziyo yaba liqela eliphezulu elineengoma abazibhalayo-uAnn noNancy Wilson babengababhali beengoma eziphambili. Ngomsebenzi wabo wokuhlaba umkhosi kwii-80s zakudala, baphethukela kubabhali bangaphandle kwaye babedlala kamnandi ngeengoma ezinje ngala 'Maphupha' kunye 'Nodwa.' Bajika baba ngabaguquli beengoma ababalaseleyo, kodwa oko kwakuthetha ukuyeka inkululeko yokuyila. UAnn Wilson, ngokuqondakalayo, wayengayithandi ingoma ethi 'Yonke into endifuna ukuyenza yenza uthando kuwe' kodwa waziva enyanzelekile ukuba ayenze, kuba kucacile ukuba ingoma ibibethile.
Ividiyo yomculo iyinto yokoqobo, njengoko sibona esi sibini sihlangana, senza uthando kwi-motel, emva koko siphinde siqhagamshele emva kweminyaka xa ebonakala nomntwana. Ezi zigcawu zinqamleza kunye nenkungu yemifanekiso yebhanti eqhuba ingoma kwindawo yokubeka studio.
Kubonakala ngathi akukho mlawuli unxulumene nayo-kubonakala ngathi uninzi lwabantu oluchaphazelekayo kule ngoma lukhetha ukuhlala lungaziwa.
Kudliwanondlebe noDan Endaweni ye-AXS TV, uAnn noNancy Wilson baxoxa ngale ngoma.
UNancy: 'Yonke into endifuna ukuyenza' yingoma eyabhalwa ngumvelisi-umbhali weengoma odumileyo, uMutt Lange, owaqhubeka nokwenza umculo welizwe. Kwaye ungayiva loo ngoma ingoma esisiseko eya kuthi ibe ngumculo welizwe, awayekuyo ngelo xesha. Inehhuku enkulu, inesandi esikhulu, kodwa uAnn, hayi ingoma ayithandayo ayiculayo. Imalunga namazwi.
UAnn: Kwakhona, imalunga nengxaki yomculi okhokelayo. Kufuneka inyaniseke, kufuneka ikholelwe kumagama ayiculayo.
UNancy: Nangona sitshintshe isini sale ngoma, eyothusayo kangangokuba bayivala eIreland kuba yayiyingoma eyintombazana, i-wanton lassie, ethatha umntu obetha kabuhlungu.
UAnn: Njengokuba uyi-hitchhiker, andikwazi ke masingene emotweni sitshintshise ulwelo ngoku, Phuma . Ndiyathetha, oko kuyingozi.
UNancy: Yinto enomdla ngeengoma ezinje, nangona kunjalo, kuba ngaphandle kokuba ubenguAnn Wilson kwaye kufuneka ume apho kwaye uhambise lo myalezo usemagameni, uyazi, uninzi lwabantu xa besiva into abayithandayo ndingacingi kuzo zonke iikona zengoma. Baziva kamnandi kwaye bayimamele.
I-Halestorm ikhuphe isiciko esithandwayo sale ngoma kwi-albhamu yabo ka-2012 Ityala elingaqhelekanga ...
Kuya kufuneka wazi ukuba ubambe nini
URihanna sukumisa iingoma zomculo
Intsingiselo yokomoya ye-44
Inombolo yeengelosi ezingama-9999 ezinentsingiselo
Ndizakutya iingoma ezininzi zeepesika